> Resource > YouTube > YouTube FLV si iPhone 5: Sida loo Play YouTube on iPhone 5 Cusub
Ma doonaysaa in ay daawadaan YouTube videos on your iPhone cusub oo 5? Inta badan YouTube videos waa files FLV. Si kastaba ha ahaatee, FLV ma aha qaab taageeray video for iPhone 5. Haddii aad rabto in lagu wareejiyo files YouTube FLV si iPhone 5 Raaxo waqti kasta iyo meel kasta, aad leedahay si loogu badalo YouTube FLV si iPhone 5 qaab video socon hore.
In this article, waxaan inta badan aad ku tuso sida loo gaaro hadafka ah in aan ka ciyaaro YouTube files on iPhone 5 hab aad u fudud. Si aad u samayn, waa in aad haysato a Converter smart YouTube. Wondershare AllMyTube ( AllMyTube for Mac ) waxay noqon kartaa mid ka mid ah ugu wanaagsan. Waa a downloader weyn YouTube iyo sidoo kale Converter YouTube awood badan. Sidaa daraadeed, ma waxaad kala soo bixi kartaa oo kaliya oo aanay online YouTube videos si iPhone 5, laakiin sidoo kale qalab wareejin ururinta YouTube FLV deegaanka. Hadda, kaliya download, rakibi oo ay maamulaan version saxda on your computer. Raac tallaabooyinka hoos ku faahfaahsan.
Faahfaahsan oo ku Hanuuniyaa:
Qaybta 1aad: Sida loo rogo ama online YouTube videos si iPhone 5 loo maqli karo
Qeybta 2: Sida loo rogo ama aad videos YouTube deegaanka si ay iPhone 5
Tallaabada 1: Soo hel kasta oo la jecel yahay YouTube videos
Access YouTube isticmaalaya browser ee la doortay marka aad ku rakiban barnaamijkan. Markaas ka heli wax kasta YouTube videos aad rabto in aad ka ciyaaro iPhone 5. Attention fadlan. Marka aad u samayseen, oo aad u baahan tahay si ay u ciyaari online.
Talaabada 2: Download YouTube videos
Ma aad isku aragto sabayn "Download" icon ku geeska sare ee midigta ah videos ciyaartoyda? Waxaa loola jeedaa app waxa uu si guul leh u ogaado videos ah. Just u riix si aad u bilowdo lagala. Marka lagu sameeyey, kuwaas oo videos YouTube lagu qoran karaa app maktabadda this.
Waxaa jira hab kale oo kala soo bixi YouTube videos for iPhone 5. Waxaad nuqul ka kartaa URLs video koowaad ka dibna waxay ku dhufatey "Ku dar URL" button ee "dajinta" interface in ay halkaas ku paste.
Tallaabo 3: U beddelaan iyo wareejiyo YouTube videos si iPhone 5
Taga laybareeriga app ee si sax aad doonayay YouTube videos. Markiiba, "ayuu Beddelaan" button on geeska hoose ee midigta wuxuu noqon doonaa clickable. Hit badhanka si ay arbushin ilaa suuqa kala ah, halkaas oo aad u baahan tahay in la furo liiska qaab hoos-hoos, ka dibna waxay doortaa "iPhone 5" ka "Apple Qalabka". Ugu dambeyntii, guji "ok" si loogu badalo YouTube inay iPhone 5 qaab socon.
Marka lagu sameeyey, waxaad u baahan tahay inaad soo dhoofsadaan faylasha la gediyay YouTube in Lugood iyo sii wadaan in ay u hagaagsan in aad iPhone 5. Taasi oo dhan.
Haddii aad soo ururiyey lunsan oo YouTube videos on your computer oo aad rabto inaad iyaga lagu wareejiyo si aad iPhone 5 Raaxo on go ah, waxaad weli u baahan yihiin in loogu badalo YouTube si aad iPhone 5 qaab taageeray. Waxa aad u baahan tahay in marka hore la sameeyo waa in ay dajiyaan aad YouTube videos kombiyuutar si ay app this video for diinta. Si aad u sameyso, waxaad u baahan tahay inaad xaq u riix riix meel madhan in ay leeg- saxda ah ee maktabadda this app ee, ka dibna dooro "Import" doorasho ka submenu dhisayaa-up in ay ku shuban files. Marka dhammaan faylasha YouTube hore u yihiin maktabadda this app ee, waxaad kala socon kartaa tallaabada 3 kor ku xusan in ay sii wadaan howlgalka.